राती कि*चकन्नी सङ बियर खाएको कुरा के हो ? चि, हानमा पुगेपछी बाहिरियो सबै क*र्तुत, सत्य यस्तो रहेछ(भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
Sisir Budhathoki June 23, 2021
उनले बताए अनुसार यो घटना सत्य हो या हैन ? उनले आफ्ना धेरै साथि संग राति झगडा भएछ तर मलाई केहि थाहा भएन भन्दै कुरा राखेका हुन् । धामी,झाक्री , भुत ,प्रेतलाई अन्धबिस्वासको रुपमा लिने गरिन्छ तर कहिले काहीँ नेपालमा यस्ता घटना घटेका समाचार आइरहन्छ्न । यो घटनाको सत्य तथ्य कुरा के हो ?स्थानीय पसलको दिदीले खोलिन सबै कर्तुत र नालीबेली तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।